Isirashiya ubumi: imiqathango kwaye inkqubo kuba yokufumana
Abaninzi foreigners cinga malunga nenkqubo yolawulo olumanyanisiweyo imfuza ka-yokufumana Russian lobumi. Yithi rhoqo le nkqubo ungeniswa numerous utshintsho aimed e simplifying imigaqo. Abanye abantu bamele ayikwazi ukusebenzisa isixhobo esenziwe lula inkqubo kokufumana ubumi, kodwa bamele yanelisa iimfuno ezithile neemeko. Kufuneka baqonde indlela kwaye apho isicelo, yintoni na amaxwebhu ingaba provisioned yintoni ngokwenene kufuneka lobumi. Wonke foreigner abo bazuza ubumi ye-isirashiya, unako rely kwi izakhono ezahlukeneyo. La ziquka ezi zilandelayo: zininzi iinkqubo ezikhoyo ukuba vumela ukufumana Russian ubumi kunye eqhelekileyo lincinane, kodwa ukuba foreigners kufuneka ahlangane iimfuno ezithile. Wonke foreigner kufuneka bazi ukuba ukuze ufumane ubumi ye-isirashiya kuyenzeka kuphela phantsi kweemeko ezithile. Ngaphandle probable sizathu ke sibonwa ukwenzeka. Ubumi ye-isirashiya kusenokuba ndabona ezininzi iindlela kuxhomekeke ezikhoyo emidlalo: ukwaliwa kwesicelo i-Russian ubumi kanjalo kufuneka kakuhle kukhutshwa, kuba oko kuyimfuneko ukuba ungenise ezithile isicelo kwi-FMS. I-waiver ngu kungokuzithandela kuphela, ngoko akukho ndlela ukunyanzela kusilela ukunyanzela umntu renounce lobumi. Wonke ummi ka-kwelinye ilizwe sele ithuba kuba ummi ye-isirashiya. Oku kufuneka ukuba ibe abalandela echanekileyo umgaqo-nkqubo kuba yokufumana Russian lobumi.
Zonke izenzo kufuneka bamthwala ngaphandle kwi ukuthelekisa ixesha. Njalo, kukuncedisa iselwa elide, njengoko ukususela ngomhla ka-filing kuba ubumi okokuba kufuneka ingabi ngaphantsi konyaka omnye. Russian ubumi ifuna ukulungiswa kwezitethimenti numerous amaxwebhu kunye nokwenza ezininzi consecutive iintshukumo. Inkqubo yokufumana ubumi ye-isirashiya kusenokuba ekungumsebenzi omawenziwe ngokomthetho esezantsi scheme okanye phantsi esenziwe lula. Esenziwe lula ukufumana Russian ubumi kuphela permitted phantsi iinkqubo ezikhethekileyo.
Ezi ziquka resettlement ka-bantu bakuthi
Phantsi kwezi iimeko, significantly ukuphumela isixa-mali ixesha ukuba uza kuba yokuchitha kuba lobumi. Ngokunxulumene esezantsi umgaqo-nkqubo ufuna ukuba umfaki-sicelo ukuba ukuphila ngendlela Us ingabi ngaphantsi kweminyaka emihlanu ubudala kunye resident ye-isirashiya.
I-Russian ubumi abantwana kusekelwe eli-siseko
Ngokongezelelweyo, iimfuno: Amaxwebhu ukufumana Russian ubumi kuyimfuneko ukuba isicelo ezintandathu kude kuphele ixesha ka-iyasebenza le yokuba ngumhlali. Ngelixa inkqubo unako exclusively omdala kwaye capable umntu. Kuba abantwana inkqubo ingaba yenziwa yi-abazali okanye guardians. Le nkqubo ifumaneka kuphela kuba abantu abo fit iimfuno lwenkqubo ye resettlement ka-bantu bakuthi okanye ezinye iinkqubo. Kuba nabo, kuba significantly esenziwe lula ukufumana Russian lobumi. Inkqubo ingaba kuwuthabatha kakhulu ixesha kwaye akakwazi zifune ulungiso numerous namaphepha angama. Ukusebenzisa le esenziwe lula inkqubo unako kuphela ezithile iindidi-zicelo. Ezi ziquka foreigners mayela nemiqathango: ukugqiba nokuba ethile foreigner ukusebenzisa kokusebenza kwentshukumo ekhawulezayo umgaqo-nkqubo, kucetyiswa ukuba ukubonisana i-experienced lawyer. Idla immigrants ukususela CIS angafaka isicelo eli scheme, njengoko zi-Russian s speakers. Oku isimo unikezelwa emva ukuphunyezwa Ikhomishini, ngokunjalo ke tested kwi-ifomu ezibhaliweyo. Ngokongezelelweyo, wanikela enjalo ithuba abanye abantu phantsi kweemeko ezithile. Ilungelo ukufumana Russian ubumi phantsi esenziwe lula inkqubo iyafumaneka: Bonke ngaphezu kumazwe angaphandle kuba abantu ithuba kuxhamla a esenziwe lula inkqubo yokufumana Russian lobumi. Ukuba ke ukwenzeka kuba foreigner ukusebenzisa isixhobo esenziwe lula scheme, uya kuba ukwenza consecutive amanyathelo a standard nkqubo. Ngamnye kude kube sele eyakhe nuances, ngoko ke kubalulekile ukuba thoroughly baqonde imithetho nkqubo. Foreigners xa crossing kumda kufuneka ube visa okanye incwadana yokundwendwela. Ukususela abahlali amazwe ukuba ngala Masiko Union amalungu, kufuneka kwenzeke incwadana yokundwendwela. Kuleminyaka imihla ukususela ngomhla kokufika kweli lizwe, abasuka kwezinye iindawo, kufuneka sinike isaziso yakhe arrival, FMS. Ukuba ufuna kukrazulwa i-apartment okanye omzimba